​कसरी भयो प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको निर्णय ?
Wed, Mar 20, 2019 | 15:37:16 NST
19:30 PM ( 1 year ago )
काठमाडौं, फागुन ३० – जन्ममितिको विवादले सर्वोच्चका न्यायाधीश नै विवाजित भएपछि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिन्छन् कि बिदामा बस्छन् भन्ने अड्कलबाजी भएपनि उहाँ आफैं अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषदले पदमुक्त गर्छ भन्ने कल्पनासमेत कसैले गरेका थिएनन् ।
तर बुधबार दिउँसो प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा पराजुलीले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शपथ गराइरहँदा अप्रत्याशित रुपमा न्याय परिषदको निर्णय सार्बजनिक भयो । पराजुली शितल निवासमा पुग्नुअघि नै न्याय परिषदले उहाँ पदमा नरहेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयमा गराएपनि राष्ट्रपति र उहाँका सचिवालय बेखबरजस्तै थिए । भव्य समारोहकाबीच राष्ट्रपतिलाई शपथ गराइरहेका पराजुलीको अनुहारमा पनि त्यस्तो कुनै छनक देखिएको थिएन ।
राष्ट्रपतिलाई शपथ गराइरहँदा प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमुक्त भएको खबर सार्बजनिक भयो । राष्ट्रपतिले पदमुक्त प्रधानन्यायाधीशबाट शपथ लिनुभयो । उहाँको यो शपथ वैधानिक हुन्छ कि अवैधानिक हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जेको छ ।
पराजुलीलाई थाहै नदिई निर्णय !
प्रधानन्यायधीश आफैं न्याय परिषदको अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । परिषदमा सर्वोच्चका वरिष्ठ न्यायाधीश दिपकराज जोशी, कानुन मन्त्री, वरिष्ठ अधिवक्ता पदमप्रसाद वैदिक र रामप्रसाद सिटौला सदस्य छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै अहिले कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ ।
परिषदका अध्यक्ष स्वयं पराजुली भएपनि बुधबार दिनभरको घटनाक्रम हेर्दा परिषदले गरेको निर्णयबारे उहाँ बेखबर रहेको बुझिन्छ । राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउन उहाँ शितल निवास पुगेको बेला न्याय परिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाले प्रधानन्यायाधीश पराजुली पदमा नरहेको पत्र सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यसको बोदार्थ राष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक परिषद, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सर्वोच्च अदालतलाई गराइएको छ ।
न्यायपरिषद्को सचिवस्तरीय निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको अवकाश भइसकेको जानकारी पत्रमार्फत गराइएको हो। पत्रमा प्रधानन्यायाधीश पराजुली गत साउन २१ गते नै ६५ वर्षको उमेर हद पार गरिसकेको जानकारी गराउँदै उनी अब पदमा नरहेको उल्लेख छ।
प्रधानन्यायाधीशको उमेर विवाद सम्बन्धि शैक्षिक प्रमाणपत्र तथा अरु कागजात हेरेर बुधबार नै पराजुली पदमा नरहेको निर्णय भएको हो। न्यायपरिषदका सचिवले यो निर्णय गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । सँगै पदमुक्त भैसकेको अवस्थामा पराजुलीले कसरी राष्ट्रपतिलाई शपथ गराए भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि उब्जेको छ ।
न्याय परिषदले यस्तो निर्णय नै गर्नुथियो भने अघिल्लो दिन नै नगरेर राष्ट्रपतिको शपथकै बेला पारेर किन गरेको भनेर प्रश्न गर्नेहरु पनि छन् ।
पराजुलीको जन्ममिति विवाद सडकदेखि सर्वोच्चसम्म
जन्ममितिको विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको विषयलाई लिएर न्यायालय नै विभाजित हुन पुग्यो । पराजुलीको सेवाअवधि सकिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलास नै बहिष्कार गरे । चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्चका ९ न्यायाधीशले पराजुलीको नेतृत्वमा न्यायसम्पादन गर्न छाडेका थिए ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पक्ष र विपक्षमा नेपाल बार एशोसिएसन पनि विभाजित भयो । पराजुलीको वैधताबारे विवाद बढ्दै गएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत उचित निकास दिन सल्लाह दिए । यसअघि नै पराजुलीलाई बालुवाटार बोलाएर ओली र प्रचण्डले बिदामा बस्न या राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । तर पराजुलीले सुझाव मान्नुभएन । राष्ट्रपति समेत शपथ लिन तयार भएको बुझेपछि पराजुलीको मनोबल बढ्यो ।
यही मनोबलका साथ उहाँ राष्ट्रपतिलाई शपथ गराउन शितल निवास पुग्नुभयो र शपथ पनि गराउनुभयो । सँगै न्याय परिषदको सचिवस्तरीय निर्णयबाट उहाँ पदमुक्त भएको खबर सार्वजनिक भयो ।